Sagantaa Bu`uura Qulqulleessuu
Sarqurxa fi Hojjoomuu Dhawaatii Baaxxee
Hojjoomuu dhawaatii baaxxee gargaaramuudhaan dogoggoraa tokko tokkoo sarara sagantaa Bu`uura keessaa mirkaneessuu ni dandeessu. Tokko tokko bu`aa dhawwaatii ennaa dhumasana ilaaluun waandanda`amuuf dogoggori salphaadhaan ni Sakkatta'ama. Akeektuun sarqurxa keessatti kan tarjaa gulaalaa sarara ammee agarsiisa.Akasumas yoo sagantaan akka iddoo murtaa`a tokkotti dhaabbatu dhiibbaa gochuu barbaaddan Sarqurxa qinddeessuun ni danda`ama.
Sarara walqixaa irraatti sarqurxa raawwachuuf gama Gulaalaa foddaa bitaan tarjaasarqurxa lama cuqaasi. Sagantaan yeroo sarqurxa ga`u, hojjoomuun sagantaa ni dhaabbata.
Sajoo dhawaatii baaxxee gargaaramuun dhawaaatii baaxxeep hojjoomuun sagantaan gara adeemsaa fi fankishiniitti akka hiramu sababa ta.a.
Sajoo dhawaatii adeemsa gargaaramuun adeemsa dhawaatii hojjoomuun sagantaan adeemsaa fi fankishinii irratti akkadhawaatii baaxxee fe`amu sababa ta`a.
Amalootni sarqurxa baafata halqara keessaan mirga-cuuqaasuun sarqurxa tarjaa sarquxa keessatti argamu.
Baafata halqara keesaa kakaasuu filuun sarqurxa kakaasuu fi kakaasuu dhiisuu ni danda`ama. Yeroo sarqurxan kakaasuu dhiifame, hojjoomuu sagantaa hin dhaabu.
Iddoo filannoo sarqurxa biraa ifteessitu gulaalee sarqurxa waamuuf amaloota kan sarqurxa baafata halqara keessaa yookiin sarqurxa kan tarjaa sarqurxa baafata halqara keessaa fili.
Tarreen sarqurxa hunda madda lakkaddaa keessatti sarara lakkoofsa walqixaa wajjin agarsiisa.Sanduuqa Kakaasuu mirkaneessuudhaan yookiin qulqulleessuudhaan sarqurxa filame kakaasuu yookiin kakaasuu dhiisuun ni danda`ama.
Lakkoofsi Darbii lakkoofsa sarqurxan osoo sagantaan addaan hin citiin dura dadarbuu danda`u ifteessa.Yeroo 0 (qindaa'inoota durtii) galchitan sagantaan akkuma sarqurxan uumameen yeroo hundaa ni dhaabata.
Sarqurxa sagantaa keessaa haquuf Haqi cuuqaasi.
Doow`achuu gatii jijjiiramaawwanii
Gatiiwwan jijjiiramaa foddaa ilaalitti dabaluun torguun ni danda`ama. Tarree jijjiiramaawwan ilaalamanitti jijjiiramaa dabaluuf,maqaa jijjiiramaa sanduuqa barruu Ilaali keesaatti barreessi itti aansuudhaan Galchi dhiibi.
Gatiiwwan jijjiiramaawwanii hammata keessa yoo jiratan qofa agarsiisamu. Jijjiiramaawwan iddoo madda lakkaddaa ammeetti hin hiikamne gatii isaanii osoo hin taane ("Out of Scope") argisiisamu.
Akasumas waraantoolee foddaa ilaali keessatti dabaluun ni danda`ama. Osoo maqaa jijjiirama waraantoo gatii kasaa malee sanduuqa barruu ilaalchaatti galchitan, qabiyyeen waraantoo waamaraa ni argisiisamu.
Hantuutee jijjiiramaa duraan hiikame irraa sa`aa darbee irratti gulaalaa keessa osoo keessan, qabiyyeen jijjiiramaa sanduuqa poopii olii keessatti agarsiisama.
Foddaa Tartiibaa Bilbilaa
Waamicha walqabataa kan adeemsa fi fankishiniif ilaalcha gubbaa kenna. Adeemsa fi fankishinii kamtu waamame adeemsa fi fankishinii biraa kamtummoo madda lakkaddaa keessa tuqaa ammeerratti jechuudhaan murteessuun ni danda`ama.
Tarree Dogongorawwan Sa'aa Darbee
18 Itti fayyadamaan addan citaa
2 Dogoggora caasimaa hinmuurtoofnee
3 Deebii Gosuubii malee
14 Ulaagaa fashalaa
6 Guutinsa darbaa
8 Arree duraan qophaa`e
9 Hammanga keessaa mallatto-jalee
10 Hiika jalteenya
11 Zeeroof hiruu
12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne
20 Dogoggora qabatamaa malee
28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa
35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne
48 Dogoggora buustu DLL keessattii
49 waamicha walii galtee DLL yaraa
51 Dogoggora keesaa
52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa
53 Faayilii hin argamne
54 Haalata faayilii yaraa
55 Faayilii dura baname
57 Dogoggora mi`a I/O
58 Faayilii duraan jiru
59 Dheerina kuusaa yaraa
61 Baxxee guutuu
67 Faayiloota hedduu
63 Kuusaaa lakkoofsa yaraa
68 mi`a hin jire
70 heeyyamni didameera
71 Baxxeen qophaa`aa miti
73 Kolatiin hin raawwatamu
74 Ooftuu adda addaa faana jijjiiraan maqaa hin jiru
75 Dogoggora gahii xurree/faayilii
76 Xurree hin argamne
Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne
93 Diraa sarxaa fashalaa
4 Eegaltii reedoo irraa
425 Gargaaramuu fashala wantaa
451 Wanti walitti-qabiisa miti
423 Amala yookiin tooftaa hin argamne
460 Dhangii gabatee fashalaat
424 Wanta barbaadame
323 Mojuulii fe`uu hin dandeesu
341 Fashala kasaa wantaa
380 Gatii amala yaraa
382 Amala dubisuu qofaa
394 Amala barreessuu qofaaa
420 Barreefama wanta fashalaa
440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa
445 Wanti gocha hin deggaru
448 morkallaan moggaafamaa hin jiru
449 Morkallaan dirqalee miti
450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa
452 Sadarkaa fashalaa
453 Fankishiniin DLL ifteessamaan hin argamu
62 Faaayilii naqaa isa dhuma
438 Wanti tooftaa hin deggaru
Title is: Sagantaa Bu`uura Qulqulleessuu